Kubata CO2 kwakakosha kudzikisa kupisa kwemhepo | Green Renewables
Kubata CO2 kunokosha kudzikisa kupisa kwemweya
ChiGerman Portillo | | Tora co2
Kuti uwane icho chikuru chinangwa cheParis Chibvumirano chekusawedzera pasirese yepasirese tembiricha pamusoro pemadhigirii maviri, zvakakosha tora yakawanda yeEC2 inoburitswa nezvirimwa izvo zvinopisa zvisaririra mafuta kugadzira simba.
Chinangwa ndechekudzikamisa nyika uye isu hatifanirwe kupa kwete chete nekudzikisa mweya, asi nekuvatapa nekuvatora kubva mukabhoni. Iwe unofunga kutora sei CO2?
1 Tora CO2 naEdward Rubin
2 Mhinduro yekubuda kwegesi
3 Kudikanwa kwemutemo
Tora CO2 naEdward Rubin
Edward rubin Ndiye mumwe wevanotungamira nyanzvi pane CO2 kubatwa. Munguva yebasa rake iye akazvipira zvakanyanya kutsvagisisa kutora, kutakura uye kuchengetedza CO2 yakaburitswa nemafuta emagetsi kubva kuCarnegie Mellon University (USA). Kutenda neruzivo rwake rwakawanda, anga achitungamira iyi ndima yekutsvagisa mumishumo yese yakapihwa neIPCC.
Rubin anofunga kuti huwandu hwakawanda hwenzvimbo dzemamiriro ekunze dzinoteedzera mamiriro ezvinhu epasirese epasi pano haafunge nezvekudzora nekukurumidza kwemweya, senge iyo nyika dzakaronga kuita kuburikidza Chibvumirano cheParis, pasina kubatwa uye geological kuchengetedza kwe CO2.
Izvo hazvigoneke kudzikisa emissions nekukurumidza senge shanduko yesimba kune inogadziriswazve ichienderera. Naizvozvo, zvinodikanwa kutora CO2 yakaburitswa.
Mhinduro yekubuda kwegesi
Sezvo zvisiri nyore kurega kushandisa marasha nemafuta, uye izvo zvinonyanya kudzoreredzwa senge mhepo uye zuva zviri kukura nekukurumidza asi zvisina kukwana, hazvigoneke kuzadzikisa iyo 2% CO80 inoderera nepakati-pezana ramakore pasina CO2 inotorwa kubva mudenga.
"Tiri kurarama munyika yakapindwa nemafuta, uko kwakaoma zvikuru kubvisa nzanga kubva kwavari zvisinei nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze," anodaro Rubin.
Ruzivo rweSainzi nezve CO2 uye hupenyu hwayo kutenderera hwakafambira mberi zvakakwana kukudziridza nekushandisa matekinoroji kubatsira kubata, kutakura uye kuchengeta CO2. Nenzira chete iyi huwandu hwakawanda hweCO2 hunowanikwa mudenga parizvino ungaderedzwa. Izvo zvinodikanwa, kuti aya marongero aiswe kushanda, kuti kudyara pane CO2 kubatwa kunoitwa kuburikidza nemirau.
"Makumi gumi apfuura kumwe kudyara kwakaitwa pamberi, sezvo makambani akafunga kuti aizoda kuedza kwakaringana kudzivirira kusvibisa, asi pakangopera tarisiro yekuita zvematongerwo enyika mune iyi nyaya, vakamira kuisa mari", anojekesa. .
Pakati pekudyara kwakaitwa, mamwe acho akaurayiwa muSpain. European Commission yakapa mamirioni makumi masere emamiriyoni euros kune CO2 kutora uye kuchengetedza chirongwa muCompostilla, iyo Endesa chirimwa chiri muCubillos de Sil (León), chakakanganiswa muna 2013, muchidimbu nekuda kwekudonha kwemitengo yekodzero dzekubuda muEU.
Rubin anosimbisa kuti zvakafanira kuti mirau iiswe iyo inobatsira kutarisisa kwemisika uye mari dzekudyara kuti dzishande nekutorwa kwe CO2. Semuenzaniso, pakadzikwa mutemo waidzora kutenderera kwemotokari dzakaburitsa mamwe magasi, Catalysts akaisirwa kudzikisa iyo CO2 yakaburitswa.
Sezvo paine bhizinesi kuseri kwechizvarwa chemagetsi, zvakaoma kubheja pane chinowanikwa chinosangana nechikumbiro ichi chiri kukura nesimba rinowedzerwazve. Kana iwe hauzoone kudzikiswa kwemweya pasina kuve nemutemo kumashure kwazvo.
Kubatwa kwe CO2 kwakasiyana nemagetsi anovandudzwa nekuti haingogone kugadzira magetsi chete, asiwo kuishandisa. Naizvozvo, chikonzero chega chekutora CO2 kuranga for CO2 inoburitsa mutemo iyo isina inoperekedzwa kubatwa.
Rubin anosimbisa kuti dai izvi zvaive zvakadaro, hapana chipingaidzo chesainzi kana tekinoroji chingadzivise CO2 kutora kubva pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Tora co2 » Kubata CO2 kunokosha kudzikisa kupisa kwemweya
Dambudziko guru, nepo chikamu chenyika chinoziva nezvekushanduka kwemamiriro ekunze, United States, naDonald Trump vari pamberi, vanobva pazvibvumirano zvepasi rese nezve kudzora mweya, nyika dzisina kusimukira uye dzichiri kusimukira hadzina matekinoroji anodikanwa ekudzora mweya unoshanda. nyika dzakasimukira dzinotenga huwandu hwekubuda kwenyika dzine hurombo, nekuti pamusoro pezvose zvakaisirwa kurarama, saka chii chekuita? tichaenda kupi mumujaho uyu unopenga?
Shanduko yesimba inofanirwa kukwidziridzwa kudzivirira shanduko yemamiriro ekunze
Mutengo wekugadzirwa kwemagetsi muzviverengero